सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी युवामा कोरोना संक्रमण
कैलाली, ९ असार-सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमण युवामा देखिएको छ । कुल सङ्क्रमितमध्ये ६८.५२ प्रतिशत युवा रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशको ९ वटै जिल्लामा गरी सोमबारसम्म १ हजार २ सय ७७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित २० देखि २९ वर्षका छन् । सो उमेर समूहका ५ सय बढी व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ ।
त्यसैगरी ३० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका २५७, १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १३८, ४० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९६, ५० देखि ५९ उमेर समूहका ४०, ६० देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका ११ र ७० देखि ७९ वर्ष उमेर समूहका ५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार १८ जना सङ्क्रमितको उमेर समूह खुलेको छैन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले धेरै जसो सङ्क्रमण विदेश र त्यसमा पनि भारतबाट आएकामा देखिएकाले युवाको सङ्ख्या बढी भएको बताए।
‘बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुलाई सङ्क्रमण जोखिम भनिएपनि हामीकहाँ लाखौं युवाहरू रोजगारीका लागि भारत गएर फर्किएका छन्,’ उनले थपे, ‘अहिलेसम्म समुदायमा सङ्क्रमण फैलिइसकेको छैन ।’
भारतबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जेठमा वैध नाकाबाट मात्रै १ लाख नागरिक स्वदेश फर्किएको सरकारी तथ्याङ्क छ । सङ्क्रमण पुष्टि भएका बिरामीहरु आइसोलेसन, क्वान्टाइन र होम क्वारेन्टानमा छन् । भारतलगायत अन्यत्रबाट आएका २९ हजार ९ सो २८ जना यहाँका ८८ वटा स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएका क्वारेन्टानमा बसिरहेका छन् ।
कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित महाकाली अस्पतालका कोभिड-१९ का सम्पर्क व्यक्ति डा. सरोज आचार्यले अस्पतालमा सङ्क्रमित आउने र निको भएर जाने क्रम चलिरहेको बताए ।
सुदूरपश्चिमका कैलालीमा ३ र बाजुरामा १ गरी ४ जनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ । पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षणका लागि १७ हजार ६११ जनाको स्वाब लिएकोमा ११ हजार ५ जनाको परीक्षण गरिएको छ ।
पीसीआर र आरडीटी गरी दुवै विधिबाट यहाँ कोरोना परीक्षण गरिँदा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित कैलालीमा देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हेर्दा सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा दोस्रो स्थानमा छ । रासस
नेकपाको आयोजनामा बृहतरुपमा बक्षारोपण गरिँदै, मोरङका ३५ हजार पार्टी सदस्यले बृक्षारोपण गर्ने
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २४ पुग्यो